हिमालयन बैंकको ईकमर्स सेवामा परिमार्जन, केके छन् सुविधा ? – Banking Khabar
हिमालयन बैंकको ईकमर्स सेवामा परिमार्जन, केके छन् सुविधा ?
हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्ना विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली “एचबीएल ई कमर्स पेमेन्ट गेट वे” को नयाँ संस्करण शुरु गरेको छ । यससँगै अब स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारी तथा ग्राहकहरुले अनलाईन सेवा मार्फत डेविट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको खरीद बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
बैंकले सन् २०१५ को जनवरी देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय कार्डधारकहरुलाई लक्षित गरी नेपाली व्यापारीहरु माझ ई कमर्स सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । बैंकले हाल शुरु गरेको ई कमर्सको नयाँ सँस्करण एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको प्रतिष्ठित विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक 2C2P थाइल्यान्ड सँगको सहकार्यमा शुरु गरेको हो । बैंकले हालै शुरु गरेको ई कमर्सको यस संस्करण अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कार्डधारकहरुलाई लक्षित गरि विकास गरिएको हो ।
नेपालकै इतिहासमा हिमालयन बैंकले सर्वप्रथम ई कमर्स सेवाको शुरुवात गरेको हो । ई कमर्सको माध्यमले वस्तु तथा सेवाको खरीद तथा विक्री विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सकिन्छ । बैंकको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय व्यवसायीहरुले आफ्ना उत्पादनहरु सजिलो तथा सुरक्षित किसिमले स्थानीय तथा अन्ताराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्न सक्नेछन् । हाल परिष्कृत गरिएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले सबै भिसा तथा माष्टरकार्ड ब्राण्डका कार्डहरु स्वीकार गर्दछ । निकट भविष्यमै अमेरिकन एक्सप्रेस, जेसिबि तथा युपिआई कार्डहरु समेत यस प्रणालीले स्वीकार गर्नेछ ।
बैंकद्वारा परिमार्जित यस ई कमर्स सेवा सवै प्रकारका व्यवसायहरु जस्तै उड्डयन, होटेल, ट्राभल तथा टुर, अनलाईन खरिद विक्री साईट, सिनेमा थिएटर आदिहरुको लागि समेत उपलब्ध छ । हाल बुद्ध एअर, यती एअरलाइन्स, सिम्रिक, गोमा तथा श्री एअरलाइन्स, मुन्चा, चेयर्स, ओलिज, स्मार्ट डोको, हिमालयन सोसल जर्नी र नेपाल सोसल ट्रेक्स आदि ले एचविएल ई कमर्स पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरिरहेका छन् । यस विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली थ्री डि सेक्युर प्रविधिमा आधारित भएको हँुदा यस प्रणालीमा रही डेविट तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत गरिने सम्पूर्ण कारोवारहरु अत्यन्त सुरक्षित हुनेछन् । इ कमर्स गेट वे तथा कार्ड प्रविधिमा बैंकद्वारा प्रयुक्त यस प्रकारको उच्चतम सुरक्षा प्रविधिले गर्दा व्यापारी तथा ग्राहक दुवैलाई उच्च सुरक्षाको अनुभूति गराउनेछ ।
शोधनान्तर बचतमा, मूल्यबृद्धिमा पनि कमि, अर्थतन्त्र सुधारतिर
एनआईसी एशिया बैंकले माग्यो कर्मचारी, अनलाइनबाटै दिनुस् आवेदन
गण्डकी विकास बैंकको नयाँ शाखा विरगञ्जमा
लक्ष्मी लघुवित्तको २६.३२ प्रतिशत लाभांश पारित
दोहोरो अंकले परिसूचक घट्दा ४५ करोडको कारोबार, १८ कम्पनीका सेयरधनीले कमाए
राम्ररी बुझौँ आस्वा प्रणाली, हेर्नुस् आस्वाबारे प्रशस्तै जानकारी
सिद्धार्थ बैंकले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी (विज्ञापनसहित)
तयार हुनुहोस् सेयर किन्न, चुनाव लगत्तै आउँदैछ चार विद्युत् कम्पनीको आइपीओ
दुई वटा वाणिज्य बैंकमा सयौँलाई रोजगारी
२८ वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटाले बढाए नाफा, कसले कति कमाए ?
व्याजदर करिडोरको महत्व र आबश्यकता : नरबहादुर थापाको विश्लेषण
कृष्णराज लामिछानेले सम्हाले महालक्ष्मी विकास बैंकको नेतृत्व
होटलमा लगानी गर्ने अवसर, र्याडिसनले एफपिओ जारी गर्ने
बैंकर्स एसोसिएसन नेतृत्वविहीन